सर्वश्रेष्ठ बाथरूम नल समाप्त गाइड 2021
सर्वश्रेष्ठ किचन नल २०२० | सर्वश्रेष्ठ भान्छा नल | भान्साको नल
घर / नल गाईड / बाथरूम नलका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय समाप्त के हो?
बाथरूम नलका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय समाप्त के हो?
2021 / 01 / 27 वर्गीकरणनल गाईड 1892 0
तपाईंले आफ्नो स्नान, बाथटब, भ्यानिटी, फ्लोरिंग, र भित्ता र picked छान्नु भएपछि, तपाईंको बाथरूम faucets एक सानो विस्तार जस्तो लाग्न सक्छ। सत्यवस्तु, यद्यपि, तिनीहरू डिजाइन डिजाइन हुन सक्दछन् जुन यसलाई वास्तवमा सबैले एकसाथ जोड्दछ ... वा तिनीहरूले सम्पूर्ण कोठाको दृश्य प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउन सक्छन्।
जब तपाईं आफ्नो बाथरूमको लागि उत्तम faucets को लागि किनमेल गर्नुहुन्छ, यो सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्पहरूको साथ सुरू गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी जब यस faucets को समाप्त गर्न आउँछ। त्यसोभए बाथरूमको नलका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय फिनिस के हो, र तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कुन फिनिशहरू तपाईंको लागि सही छन्?
के को लागी सबैभन्दा लोकप्रिय समाप्त हो बाथरूमको नल?
सब भन्दा लोकप्रिय नल समाप्त को प्रश्नको जवाफ मुश्किल छ किनभने त्यहाँ कुनै एकल स्रोत छैन जुन यो डाटा ट्र्याक गर्दछ। विज्ञहरू सबैको आ-आफ्नै राय हुन्छ, र प्रत्येक फिन्सको लोकप्रियता पनि डेभोर ट्रेंडमा आधारित परिवर्तन हुन्छ। थुप्रैले ब्रश निकल आज सबैभन्दा लोकप्रिय फिनिस हो भन्छन्, जबकि अरूले यो क्रोम छ भन्छन्।
वास्तवमा, यद्यपि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईले त्यस्तो छनौट गर्नुहोस् जुन उत्तम चाहिन्छ र कोठाको लागि तपाईको दृष्टिमा उत्तम मिल्छ। कुन बाथरूम तपाईको बाथरूममा उत्तम फिट हुन्छ भनेर हेर्नको लागि प्राय सबै भन्दा सामान्य फिनिशहरू तुलना गरौं।
बाथरूम नलका लागि शीर्ष अन्तिम विकल्पहरू
नल समाप्त गर्नका लागि तपाईका छनौटहरू विगत केही दशकहरूमा नाटकीय रूपमा बढेको छ। २००० को शुरुवात भन्दा पहिले, लगभग सबै बाथरूममा या त पॉलिश काँसा वा क्रोम फिक्स्चरहरू थिए। आज हामीसँग अझ धेरै विकल्पहरू छन्, तर यसको मतलब शपिंग अलि भारी हुन सक्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय समाप्तिहरूको बारेमा सिकेर र उनीहरूका लाभ र विपक्षहरूमाथि विचार गरेर तपाईंको प्रक्रिया सुरू गर्नुहोस्।
तपाईंले सायद निकल ब्रश निकल देख्नुभयो होला, यदी तपाईंलाई थाहा छैन यो के हो भनिन्थ्यो। यसको पहेंलो वा खैरो अंडरटोनसको साथ चाँदीको जस्तो रंग छ। योसँग साटन फिनिश पनि छ त्यसैले यसले सफ्ट प्रतिबिम्ब भन्दा नरम शीन प्रदान गर्दछ। यो आज सबै शैलीहरूको घरहरूमा सामान्य छ, रस्टिकबाट पारम्परिक।
ब्रश निकल को पेशेवरहरु
यदि तपाईं आफ्नो बाथरूम पोशाक गर्न को लागी एक सजिलो तरीका चाहनुहुन्छ भने, ब्रश निकल फिक्स्चरहरू सही छन्। फिनिश यति लोकप्रिय छ कि तपाईंसँग नल विकल्पहरू उपलब्ध छन्। फिनिश टिकाऊ पनि छ, त्यसैले यसले आफ्नो नयाँ-धेरै-बर्ष देखिन धेरै बर्ष देखि राख्छ। साथै, त्यहाँ कम सम्भावना छ तपाईंको नल पुरानो बर्ष पछि देख्न थाल्छ।
ब्रश निकल को विपक्षमा
जबकि प्रत्येक बाथरूम सहयोगी तपाईं चाह्न सक्नुहुनेछ ब्रश निकलमा आउँनेछ, यो कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो फिनिश बिभिन्न उत्पादकहरूबाट अलिक फरक टोनमा आउन सक्छ। यो कठिन बनाउँछ यदि तपाईं आफ्नो faucets आफ्नो तौलिया र्याक, टुथब्रश होल्डर, शौचालय ब्रश, र अन्य वस्तुहरू मिलाउन चाहनुहुन्छ भने।
ब्रश निकलको नजिकको आफन्त निकल निकृष्ट छ। यो सामान्यतया ब्रश निकल को रूप मा उही रiny हुन्छ तर एक चमकदार समाप्त संग।
पॉलिश निकल को पेशेवरहरु
पॉलिश निकल सफा गर्न सजिलो छ र यो टिकाऊ समाप्त छ ब्रश निकल जस्तै गर्दछ। सामान्यतया, क्रोम र ब्रश निकल बीचको भिन्नता विभाजित गर्न चाहने व्यक्तिको लागि, पालिश निकल आदर्श मध्य मैदान हो।
पॉलिश निकल को विपक्षमा
म्याट र साटन फिनिश हालका वर्षहरूमा बढी लोकप्रिय भएका छन्। नतिजाको रूपमा, धेरै व्यक्तिहरू पॉलिश निकल ब्रश निकल भन्दा कम आधुनिक र ट्रेंडी देखिन्छन्। यो सूचीमा अन्य धेरै जत्तिकै समाप्त हुने जस्तो साधारण पनि छैन। यसको मतलब यो हो कि यो खोज्न मुश्किल हुन सक्छ र जब तपाइँ यसलाई फेला पार्नुहुन्छ, यो प्राय: महँगो हुन्छ।
क्रोम वरिपरि सबै भन्दा राम्रो परिचित मध्ये एक हो, र घर-सजावट शब्द मात्र होईन। यो एक चाँदी जस्तो रंग छ एक धेरै चमकदार, चमकदार समाप्त संग। यो लामो समयको लागि नलको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय फिनिश थियो, यद्यपि हालका वर्षहरूमा थोरै फेड हुँदैछ।
क्रोम को पेशेवरहरु
नलका धेरै मोडेलहरूमा, क्रोम सबैभन्दा कम लागत प्रभावी उपलब्ध हुनेछ किनकि यो यति व्यापक छ र यो उत्पादन गर्न सस्तो छ। यसको माथि, क्रोम अविश्वसनीय रूपमा टिकाऊ र स्क्र्याच-प्रतिरोधी हो, र यो पत्ता लगाउनको लागि यो सजिलो फिनिश हुन सक्छ। यसले विभिन्न निर्माताहरूबाट मोडेलहरू मिसिन सजिलो बनाउँदछ।
यो भाग्यशाली छ कि क्रोम सफा गर्न यत्तिको सजिलो छ किनकि यसको प्राथमिक नकारात्मक पक्ष भनेको यसले फिंगरप्रिन्टहरू र पानीको दागहरू सजिलै देखाउँदछ किनभने यसको उच्च ग्लोस समाप्त भएको कारण।
म्याट ब्ल्याक धेरै सजावटमा विलासिता महसुससहित एक लोकप्रिय फिनिस भएको छ, घरको सजावटबाट प्रदर्शन कारसम्म इलेक्ट्रोनिक्स सम्म। यो समाप्त अनौंठो रूपमा एक माइक्रोस्कोपिक स्तरमा कुनै न कुनै टेक्सचरको लागि सिर्जना गरिएको हो। यसले बनावटलाई प्रकाश पार्ने भन्दा प्रकाश क्याप्चर र वितरण गर्न अनुमति दिन्छ।
मैट ब्ल्याकको पेशेवरहरू
विशिष्ट, आधुनिक हेराई म्याट कालोको सबैभन्दा उल्लेखनीय लाभ हो। यो केवल शानदार मात्र देखिदैन तर यो विशेष रूपमा बहुमुखी पनि छ, किनकि कालो लगभग कुनै पनि बाथरूम रंग योजनाको साथ जान्छ। यो समाप्त सफा र मर्मत गर्न पनि सजिलो छ।
म्याट ब्ल्याकको विपक्ष
म्याट कालोको लागि प्राथमिक झटका यसको मूल्य ट्याग हो। निर्माताहरूले जान्दछन् कि यो कसरी मांगमा छ, त्यसैले तिनीहरूले यसको लागि एक प्रिमियम लिन्छन्।
कपर लोकप्रिय नल समाप्त को लाईनअप को सबैभन्दा नयाँ थप को एक हो, तर यो विगतको रेट्रो बाथरूम को एक कलब्याक छ। कपरको नल क्लासिक जलेको सुन्तलाबाट सुरू हुन्छ, नयाँ तामाको परावर्तनक दृश्य। केही व्यक्तिले आफ्नो तांबेलाई त्यस्तो तरीकाले नै हेरचाह गर्न छनौट गर्दछन्, जबकि अरूले तामाको युग स्वाभाविक रूपमा छोडिदिन्छ जबसम्म यसले प्रख्यात समुद्री समुद्री हरियो पाटिना विकास गर्दैन।
कपर एउटा विशेष र सुन्दर देखिन्छ, विशेष गरी औद्योगिक वा देहाती सजावट शैलीका घरहरूमा। यद्यपि यसको चाखलाग्दो कार्यात्मक फाइदाहरू पनि छन्।
एउटाको लागि, तामाले आफूलाई केही हदसम्म "निको" गर्न सक्दछ, समयको अन्तरालमा कालोहरू कालो हुँदै गयो जबसम्म उनीहरूले तामाको प्राकृतिक पाटिनामा नमिसाउँन्। यसका अतिरिक्त तामा प्राकृतिक रूपमा जीवाणुरोधी हुन्छ, त्यसैले यो कीटाणुहरूको स of्क्रमण कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
कपर नल फिनिश को सबै भन्दा टिकाऊ छैन। यसले स्क्र्याचहरू "चal्गाइ" गर्न सक्दछ, तर स्क्र्याचहरू पहिलेको लागि यो असुविधाजनक रूपमा सजिलो हुन्छ।
यदि तपाईं यसको मूल सुन्तला रंग कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने कपर पनि उच्च मर्मतसम्भार गर्न सक्दछ। यसको माथि, तामा बाथरूम faucets को लागी एक दुर्लभ समाप्त विकल्प छ। यदि तपाईं सामानहरू र अन्य पूरक आईटमहरू तपाईंको faucets सँग मेल गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई तिनीहरूलाई फेला पार्न गाह्रो हुन सक्छ।
पालिश काँसा १ 1980 s० र १ 1990 1990 ० को दशकमा अविश्वसनीय लोकप्रिय थियो। १ 2000 XNUMX ० दशकको अन्त र २००० को शुरुमा सुरू भएता पनि, यो पुरानो भएको देखिन्थ्यो। विगत केहि वर्षहरुमा, तथापि यसले पुन: फिर्ता लिन सुरु गर्यो।
यसको पहेलो, सुन जस्तो रंगको साथ, ब्रास हाजिर गर्न सजिलो छ। खास गरी पलिश्डको ब्रासको उच्च चमक छ।
पॉलिश ब्रास को पेशेवरहरु
चमकदार शीनलाई धन्यवाद, पालिश काँसा सफा गर्न धेरै सजिलो छ, जस्तै क्रोम। यो अक्सर टिकाऊ पनि हुन्छ, यद्यपि यो नलको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ।
पॉलिश ब्रास को विपक्षमा
पुरानो शैलीहरू फिर्ता ल्याउन मुश्किल हुन सक्छ। फेसनमा "रेट्रो" र "मिति" बीचमा एक राम्रो रेखा छ कि ठीक तरिकाले, तपाइँ थकलो नभई ट्रेंन्डी देख्नको लागि आफ्नो पॉलिश पितललाई सही आधुनिक बाथरूम सजावटको साथ जोडी गर्न आवश्यक छ।
पालिश काँसाले कमबैक गर्न सक्दछ, विशेष गरी रेट्रो चिक शैलीका बीचमा, तर केही व्यक्तिहरूले अधिक आधुनिक फिनिशसहित ब्रासको रंगलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यस ठाउँमा साटन पीतल आउँदछ। केही उत्पादकहरूले यसलाई ब्रश काँसा भने, तर कुनै पनि नाम अन्तर्गत यसमा सुनको जस्तो ब्रासको टोन छ जसमा साटन शीन बढी हुन्छ।
साटन ब्रासको पेशेवर
साटिन पीतलको अद्वितीय आधुनिक रूप छ, र यो उच्च श्रेणीको लुकको लागि लक्ष राखेका घरहरूमा राम्रोसँग फिट छ। किनकि फिनिशमा पालिश काँसाको उच्च चमक छैन, यसले सजिलै औंठाछापहरू देखाउँदैन।
साटन ब्रासको विपक्ष
साटन ब्रास लोकप्रियतामा बृद्धि भइरहेको छ, यो अझै गृह सजावट बजारमा व्यापक छैन। यसको मतलब यो छ कि मिरर र तौलिया बारहरू जस्तै सामानहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन सक्छ जुन तपाइँको साटन ब्रास faucets सँग मेल खान्छ।
स्टेनलेस स्टील घरको सबै कोठामा भान्साबाट बाथरूम र बाहिरका सबै भन्दा लोकप्रिय फिनिशमध्ये एक भएको छ। यो ब्रश निकल जस्तै देखिन्छ, तर स्टेनलेस स्टीलको नीलो अण्ड्रोटोन हुन्छ जबकि निकलको अण्डरटोनहरू अधिक पहेंलो वा खैरो रंगको हुन्छ। अझै, स्टेनलेस स्टील बाथरूमको कुनै पनि शैलीमा राम्रोसँग फिट हुन सक्छ।
स्टेनलेस स्टीलका पेशेवरहरू
किनकि स्टेनलेस स्टील यति लोकप्रिय छ, तपाईं एक समान लुक बनाउन को लागी मिल्दो सामान र बाथरूम उपकरणहरु फेला पार्न सजिलो समय हुन्छ।
स्टेनलेस स्टीलको विपक्ष
स्टेनलेस स्टील लोकप्रिय हुन सक्छ, तर यो सुविधाजनक छैन। यो काफी सजीलो खरोंच। यसलाई सफा राख्न पनि गाह्रो हुन सक्छ किनकि यसले छिटो औंठाछाप मात्र देखाउँदैन तर यसलाई विशेष सफा गर्नेसँग सफा गर्नु आवश्यक छ र इस्पातको अन्नले सफा गर्नुपर्छ।
तेलले घेरिएको पीतल विगतको दशकमा फस्टाइरहेको छ वा यस्तै प्रकारले बाथरूम faucets र किचनको faucets मा। समाप्तमा गाढा खैरो वा लगभग कालो देखिन्छ, तर केही तामाको टोनहरू यसको साथ चम्किन्छन्। यसको सामान्यतया साटन जस्तो फिनिश हुन्छ, र यो अत्यधिक लोकप्रिय परम्परागत र देहात घरहरू, साथै टस्कन सौन्दर्ययुक्त घरहरू छन्।
तेल-रबड काँसाको पेशेवरहरू
यसको बढ्दो लोकप्रियताको लागि धन्यवाद, तेलले घेरिएको काँसा अब तपाईं जहाँसुकै हेर्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई छनौट गर्नको लागि धेरै नल विकल्पहरू दिन्छ। थप रूपमा, म्याट-जस्तो फिनिशले सजिलैसँग पानीको दागहरू देखाउँदैन।
तेल-रबड कांस्यको विपक्ष
अचम्मको कुरा, तेलले घेरिएको काँसाको लोकप्रियता बढेको छ, त्यसैले यसको मूल्य पनि छ। यो faucets को लागी सब भन्दा महँगो विकल्प को लागी हुन्छ, त्यसैले तदनुसार बजेट गर्न निश्चित हुनुहोस्।
विभिन्न प्रकारका समाप्तहरूका लागि सफा सल्लाहहरू
हामीले पत्ता लगायौं कि केहि नल फिनिश अन्य भन्दा सफा गर्न सजिलो हुन्छ। जबकि प्राय: सफा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यहाँ ध्यानहरू राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण विचारहरू हुन्छन् किनकि तपाईंले नलहरूको लागि किनमेल गर्नुहुन्छ र तपाईंको नयाँ फिक्स्चरको हेरचाह गर्न सिक्नुहुन्छ।
मोम र भरिने एजेन्टहरूको साथ सावधान रहनुहोस्
मोमहरू र भरिने एजेन्टहरूले निश्चित समाप्तमा सतह अपूर्णताहरू भर्दै उनीहरूलाई चम्किला चमक दिन्छन्। जबकि यी सामग्रीहरु संग उत्पादनहरु पॉलिश समाप्त गर्न को लागी सही छन्, उनीहरु म्याट वा साटन जस्तो फिनिश को लागी उपयोग नगर्नुहोस्। यी फिनिशहरू ठीक प्रतिबिम्बित चमकको अभाव सिर्जना गर्न बनावटका हुन्छन्, र यी उत्पादनहरू ती बनावटहरूमा भरिएर अनावश्यक चमक थप्नेछ, प्राय: असमान वा स्प्लट तरीकामा।
नलको प्राय जसो पनि सफा गर्नुहोस्
विशेष गरी यदि तपाइँका बच्चाहरू छन् भने, कुनै किसिमको पदार्थ र सामग्री के प्रकारहरू तपाइँको नलमा पुग्न सक्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छैन। केहि प्रकारका सामग्रीहरू, विशेष गरी ती एसिडिकहरू, तपाईंको समयावधिमा टाढासँगै टाँसिन सक्छन्। यो क्षति रोक्नको लागि, आफ्नो नललाई प्राय: अक्सर सफा गर्नुहोस्, तपाईं पानी र सुकाउने कपडा मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ भने।
घर्षण सफा गर्ने सफा हो
ब्रस र रफ स्पन्जहरू सहित घर्षण सफा गर्नेबाट बच्न यो थम्बको राम्रो नियम हो, कुनै पनि नल फिनिशको लागि ताकि तपाईं यसलाई खरोंच नगर्नुहोस्। यद्यपि निकल फिनिशका लागि यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। निकलले सजिलै बिगार्न वा रस्ट गर्न सक्दछ यदि यसलाई कोरियो भने, यदि खरोंच यति सानो छ कि तपाईंले ती देख्नुहुन्न। यस जोखिमबाट बच्न, यसको सट्टामा माइक्रोफाइबर कपडाहरू छान्नुहोस्।
सबै भन्दा माथि, उत्पादकहरूको देखभाल गाइड प्रयोग गर्नुहोस्
जबकि केहि समाप्त बारे मा सामान्य दिशानिर्देशहरु छन्, निकल मा घर्षण बेवास्ता गर्नु र म्याट समाप्त मा waxes बेवास्ता गर्न को लागी, एक सुनौलो नियम छ: आफ्नो नल निर्माता को देखभाल निर्देशनहरु पालना गर्नुहोस्।
बिभिन्न उत्पादकहरूले एकै फिनिशलाई बिभिन्न तरीकाले तान्न वा लागू गर्न सक्दछन्, त्यसैले उत्पादहरू जुन एकका लागि काम गर्छन् त्यसले अर्कोलाई हानी गर्दछ। थप रूपमा, यदि तपाईं निर्माताको हेरचाह निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्न भने, यसले तपाईंको faucets मा वारंटी शून्य गर्न सक्दछ।
तपाइँको आदर्श बाथरूम नल समाप्त छनौट गर्दै
अन्तमा, तपाईको बाथरूमको नलका लागि तपाईको फिनिश विकल्प तपाईको व्यक्तिगत शैलीमा तल आउँदछन् साथसाथ र विपक्ष तौल। तपाईंको विकल्पहरू माथीको गाइडसँग तुलना गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो बाथरूममा उत्तम नलहरूको मजा लिने तरिकामा राम्रो हुनुहुनेछ। थप सामानहरूको लागि जब तपाई किनमेल गर्नुहुन्छ, हाम्रो बाथरूमको नल किनेका गाईडहरू जाँच गर्नुहोस्।
सम्बन्धित उत्पादन सिफारिश
H होल In इन्च सेन्टरसेट नल ब्रश निकल
म्याट कालो दुई-ह्यान्डल व्यापक बाथरूम नल
क्रोम बाथरूम नल ड्रेन विधानसभा संग
अघिल्लो :: कालो नलको संरचना र उत्पादन प्रक्रिया अर्को: कसरी म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्ने
58m2 खुला कोठा डिजाइन, रोमान्टिक "दूध चिया" शैली, सुपर शैली!
2021 / 06 / 22 238
डेल्टा बाथरूम नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा बाथरूम नलका लागि खरीद मार्गनिर्देशन
2021 / 05 / 13 3000
डेल्टा स्नान نل
2021 / 05 / 09 4153
डेल्टा नल समीक्षाहरू: २०२१ डेल्टा किचन फ्याट्सका लागि गाईड खरीद
2021 / 05 / 08 1725
2021 / 02 / 04 2991
डेल्टा किचन नल समीक्षा: २०२१ डेल्टा किचन नलका लागि किन्ने मार्गनिर्देशन
2021 / 02 / 03 1548